नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): ए रातामकै ! के देखियो आज यस्तो !! पानी माथि जमिनमा जस्तै हिंड्न सक्ने सँसारकै पहिलो ब्यक्तिको यो भिडियो हेरेर हामी आज तीन छक पर्यौं, हेर्नुस् त यस्तो पनि हुँदो रहेछ आम्मै नि !
ए रातामकै ! के देखियो आज यस्तो !! पानी माथि जमिनमा जस्तै हिंड्न सक्ने सँसारकै पहिलो ब्यक्तिको यो भिडियो हेरेर हामी आज तीन छक पर्यौं, हेर्नुस् त यस्तो पनि हुँदो रहेछ आम्मै नि !